Wararka Maanta: Jimco, Jan 11, 2013-Qoxooti Soomaaliyeed oo ka cararaya Amni-darrida ka jirta dalka Kenya oo ku qulqulaya Koonfureed Soomaaliya
C/risaaq Maxamed oo ah wariye Soomaaliyeed oo xeryaha Dhadhaab ku noolaa 21 sano ayaa VOA-da u sheegay in ammaan-darrada ugu daran ay ka jiraan labada xero ee IFO I iyo IFO II, kuwaasoo uu sheegay inay degeen dadkii kasoo barakacay Soomaaliya sannadkii 2011.
“Dhab ahaan, markii aan wareysiyo la yeellanay qoxootiga waxay noo sheegeen inay kala kulmaan jir-dil, kufsi iyo xatooyo, gaar ahaan xerada IFO II, taasina ay tahay midda ku qasabtay inay halkaas isaga cararaan,” ayuu yiri wariyaha oo intaas ku daray: “Waxaan xusuustaa hooyo ii sheegtay inay xeryahan u timid inay nabadgalyo hesho, balse ay la kulantay kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ka baxsan bani’aadamnimada.”
Suxufigu wuxuu sheegay in inta badna kooxaha burcadda ah ay ka yimaadaan goobaha ku dhow xeryaha qoxootiga, gaar ahaan xilliyada habeenkii ah, iyagoo weerarrada u geystay sidii ay lacag ku heli lahaayeen.
“Dhab ahaan, waxaan dareemaynaa in xeryaha Dhadhaab ay ka ammaan-darro ka jirto, balse ma aragno dhibaato kale oo ka jirta xeryahaas,” ayuu hadalkiisa raaciyay wariyaha.
Rabshadaha iyo ammaan-darrada ka jirta xeryaha Dhadhaab Kenya ayaa waxay gaareen meel sare, horraantii toddobaadkan laba qof ayaa lagu dilay bam lagu weeraray xerada Dhagaxleey iyadoo sidoo kalena uu qof six un ugu dhaawacay qarax ka dhacay xerada IFO II bishii December ee lasoo dhaafay.
Inta badan weerarrada ka dhaca gudaha waddanka Kenya waa kuwo lagu bartimaameedsado ciidamada Kenya iyo dadka aad ugu dhow, iyadoo lagu dilo saraakiisha ciidamada ammaanka Kenya magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya oo 100-km u jirta Dhadhaab.
Hay’adda qoxootiga adduunka ee UNHCR oo maamusha xeryaha ayaan sheegtay inaysan caddeyn in weerarrada laga soo qaadayo gudaha dalka Kenya iyo inay geysanayaan kooxo dabley ah oo kasoo tallaabayaha Soomaaliya.
Madaxa xiriirka gudaha ee UNHCR, Mans Nyberg ayaa u sheegtay VOA-da in 100-qof oo qoxooti Soomaaliyeed ay ka tageen xeradaas maalmihii lasoo dhaafay.
“Runtii waa mid adag in la kala caddeeyo in dadkan ay si rasmi ah ugu guureen gudaha Soomaaliya iyo inay dib ugu soo laabanayaan xeryaha Dhadhaab. Laakiin waxay uga baxayaan xeryaha si iskood ah,” ayay tiri Nyberg.
Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli ay xukuuumada Kenya amar ku siisay Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkeeda inay dib ugu laabtaan xeryaha qoxootiga Dhadhaab oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, halkaasoo labadii sano ee ugu dambeysay rabshado ka jireen.